Darpan Nepal – डा. रजनी हाडाका टिप्स: यसरी बचाउन सकिन्छ, मिर्गौल
डा. रजनी हाडाका टिप्स: यसरी बचाउन सकिन्छ, मिर्गौल
-पिसाबमा फिँज आउने ।
-विस्तारै विस्तारै जिउ सुन्निने ।
-अचानक जिउ सुन्निने ।
-पिसाब कम हुने ।
-पिसाबबाट रगत जाने ।
उच्च रक्तचाप र मिर्गौला रोगबीच अन्तरनिहीत सम्बन्ध छ । उच्च रक्तचापले मिर्गौलालाई बिग्रदै लैजान्छ भने मिर्गौला रोग लागेपछि झण्डै ८० प्रतिशत विरामीमा उच्च रक्तचाप पाइन्छ । वंशाणुगत, मिर्गौलाको रोग अथवा अरु कुनै पनि कारणले उच्च रक्तचाप भएमा यसले मिर्गौला रोगमा आगोमा घ्युको काम गर्दछ । र, मिर्गौलालाई छिटोछिटो निस्कृय पार्दछ । यसबाहेक, उच्च रक्तचापले गर्दा अल्पायुमै हृदयघात, पक्षघात तथा मिर्गौला फेल हुने सम्भावना बढ्ने गर्छ ।
स्वास्थ्य सम्बन्धी जनचेतनाको कमीले गर्दा जनतामा एउटा गलत धारणा छ, ‘औषधि खाएपछि बानी पर्छ, उच्च रक्तचापको उपचार तुरुन्तै गर्नुहुन्न ।’ यस्ता धारणाबाट मुक्त हुनुपर्छ । उच्च रक्तचाप देखिनासाथ पिसाव तथा मिर्गौलाका जाँच गर्नुपर्छ । मिर्गौला रोग भएमा त्यसको उपचार गर्ने र नभएमा उच्च रक्तचापको उपचार गर्नुपर्छ । यसबाट अल्पायुमै हुने गरेको पक्षघात, हृदयाघात तथा मिर्गौला फेलको समस्या हटाउन सकिन्छ ।
पश्चिमा जीवनशैली, भागदौडको जिन्दगी, तनाव तथा जंकफुडको अधिक प्रयोगका कारण विश्वमै मोटोपना तथा मधुमेहका विरामीको संख्या बढ्दै गएको छ । मधुमेहका कारण मिर्गौला रोगी पनि बढेका छन् । तसर्थ मधुमेहका विरामीले मधुमेहको सही उपचार गरेर रगतमा चिनीको मात्रालाई सन्तुलनमा ल्याउनु यसबाट बच्ने पहिलो उपाय हो । अनि वर्षेनी पिसाबको जाँच गरेर मिर्गौलाको परीक्षण गर्नु दोश्रो उपाय हो । किनकी मधुमेहले मिर्गौलामा पारेकोे असरको पहिलो लक्षण भनेकै पिसाबबाट प्रोटिन फालिनु हो ।
इन्डोक्राइनोलोजिस्ट चिकित्सकहरुको सजगताकै कारण पछिल्लो समय मधुमेहका विरामीले पिसाबको जाँच गरेर मिर्गौलाको परीक्षण गर्न थालेका छन् । तैपनि अन्य धेरै विरामीले रगतमा चिनीको जाँच मात्र गरेर बसिरहेको पाइन्छ । सोही कारण विरामी मिर्गौलामा धेरै क्षति पुगिसकेपछि अन्तिम अवस्थामा मात्र अस्पताल आउने गरेका छन् । दैनिक खानपानमा ध्यान दिनु, मोटोपना हुन नदिनु, नियमित रुपमा शारीरिक कसरत तथा व्यायाम गर्नु नै मधुमेहबाट बच्ने उपाय हो ।
धेरैले मिर्गौलाको पत्थरीलाई सामान्य रुपमा लिन्छन् । पत्थरीले मिर्गौलालाई पूर्णतया असर पार्छ । समयमै पत्थरी निकालेर मिर्गौला बचाउन सकिन्छ । एकपटक मिर्गौलामा पत्थरी भैसकेकाहरुले फेरि पत्थरी नबन्ने विधि अपनाउन जरुरी हुन्छ । के कारणले पत्थरी भएको हो, त्यो पत्ता लगाएर पनि मिर्गौलालाई विग्रनबाट जोगाउन सकिन्छ ।
दैनिक ३-४ लिटरसम्म पानी पिउनुपर्छ । प्रशस्त मात्रामा पानी पिउँदा मिर्गौलामा हुने भीआईटी तथा मिर्गौलाको पत्थरीवाट बच्न सकिन्छ । शरीरका विभिन्न अंगहरुका साथै मिर्गौलालाई समेत रोग लाग्नबाट जोगाउन सकिन्छ । मिर्गौलाले काम कम गर्न थालेको हो भने चिकित्सकको परामर्श बमोजिम पानी पिउनुपर्छ ।
जीउ दुख्दा, जीउ सुन्निदा कयौं मानिस पेनकिलर प्रयोग गर्दछन् । पेनकिलर -एनएसएआईडी) को अधिक प्रयोग तथा अनावश्यक प्रयोगले पनि मिर्गौलामा प्रत्यक्ष असर गर्दछ । त्यसैले, मिर्गौलालाई जोगाउन पनि सकेसम्म एनएसएआईडी पेनकिलरलगायतका औषधिको अनावश्यक प्रयोग नगर्नु नै उचित हुन्छ ।
विशेषगरी, जन्मँदै एउटा मिर्गौला लिएर जन्मेको छ, शल्यक्रियाबाट एउटा मिर्गौला झिकिएको छ वा मिर्गौलाले कम काम गरिरहेको छ भनेपनि त्यस्ता व्यक्तिले यसखालका औषधि खानुहँुदैन । यति गरेमा मात्र पनि मिर्गौला बिग्रनबाट जोगाउन सकिन्छ ।
Previous Postसन्तुलित आहारले तनाव हटाउन सहयोग गर्छ’ Next Postयीनै हुन बिमान चालिका पृथुला रशिद, उपचारका क्रममा भखरै मृत्यु भयो,…